Xidig Ka Tirsanaa Real Oo 'Balaayo Xun U Saadaaliyay Messi' Hadii Ay Barca Hanato La Liga %
Inkastoo ay hada hada Barcelona, midka kaliya ee ugu cad-cad inay ku guuleysato, hadana waxaa muhiim ah in qalbiga lagu hayo inay wax walba dhici karaan, maadaama ay harsan yihiin kulamo waa weyn oo la ciyaari doono.
Bluagrana ayaa waxay hada hogaanka La Liga ay uga haysaa Atletico Madrid, oo kaalinta labaad fadhisa, waxayna guud ahaan shaqeysatay Barca, dhibcooyin gaaraya 69 dhibcood, walina lagama badin.
Sikastaba, hadii ay dhacdo in Barcelona ay ku guuleysto horyaalka La Liga, Lionel Messi oo kooxdan udheela wuxuu kasoo mari doonaa sidii uu horey ahaa, sida uu aaminsan yahay Jorge Valdano, oo horey Real Madrid ugu soo dheelay.
Ninkaan oo hada ah Nuqdeeya arrimaha cayaaraha ah, kaasoo horey Madrid, ugu soo noqday tababare ama macalin ayaa wuxuu sheegay in kulankii Atletico Madrid, oo jabka kala kulantay Barca, uu horyaalka go’aamiyay.
“Waxaan dareemayaa in Atletico Madrid, ay fiican kulanka isugu soo diyaarisay, laakiin ay la kulantay wax ka tan weyn oo cadaadis ah,” Jorge Valdano, ku sheegay wareysi uu siiyay Muuq-baahiyaha Being Sports.
“Laakiin hadii ay horyaalka ku guuleysato Barcelona, wax xoogaa Leo Messi wuxuu kasoo hoos-mari doonaa sida uu horey ahaa,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Jorge Valdano oo si weyn loogu xasuusto inuu Real guulo la gaaray.